THB Champions League D 1 Malagasy Voatazon’ny As Jet Mada ady sahala ny Fosa Juniors
Tsena Anosibe Tery teo am-pisokirana vary ny tanan’ilay zazalahy
Nanararaotra ny fahanginana sy ny fikatonan’ny tsena mpivarotra PPN aorian’ny mitatao vovonana, araka ny noferan’ny fanjakana amin’izao
Naina Andriantsitohaina teny Anosibe “Hiala mora ianareo sa kamio no hanala anareo ?”
Nidina tampoka tsy nisy fampandrenesana nanara-maso ny tsena teny amin’ny Boriborintany faha-4 eto Antananarivo toa ny teny Anosibe ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina.
Voatazon’ny As Jet Mada Analamanga ady sahala 2 – 2 ny ekipan’ny Fosa Juniors Boeny tamin’ny sabotsy 13 aprily teo tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina.
Lalao izay tafiditra amin’ny fiadiana ny Thb Champions League sokajy D1 Malagasy 2019 eo amin’ny taranja baolina kitra, dingana faha-2 andro faha-2. Ireo vokatra hafa tamin’ny sabotsy 13 sy omaly alahady 14 aprily 2019 : Zanak’ala M/Ambony 1 - 1 Ajesaia Bongolava ; 3Fb Toliara A/Andrefana 1 - 2 As Adema A/Manga ; CNaPS Sport Itasy 5 - 1 Fc Ilakaka Ihorombe.